Iincwadi ezi-4 kunye neencwadi ukuqonda ubuncinci | IBezzia
UMaria vazquez | 07/07/2021 10:00 | yokuPhila
Umbono wobuncinci wasetyenziswa okokuqala sisithandi sobulumko saseBritane uRichard Wollheim ngo-1965 ukuchaza imeko yobugcisa eyavela ngokuchaseneyo nobugcisa be pop. Eli xesha kodwa liye layaphula imiqobo kubugcisa chaza indlela yokuphila esimema ukuba sizihlube kwizinto ezigqithisileyo kwaye sizinciphise kokubalulekileyo.
Abahlobo abaninzi, uxanduva ngakumbi, imali eninzi, izinto ezininzi eziphathekayo ... Ubuncinci buchasene nayo yonke into esisiqhelo sobomi esibonakala ngathi siyasinyanzela, ukuma ubomi obulula nobuzele. Ubomi ekuthi la maxwebhu alandelayo kunye neencwadi zisincede siqonde ngcono.
1 Ubuncinci: izinto ezibalulekileyo
3 Ubuncinci bezinto ezincinci
4 Ayizizo zonke okanye yonke into namhlanje
Ubuncinci: izinto ezibalulekileyo
"IMinimalismo" yincwadi eneenkwenkwezi UJoshua Fields Millburn kunye noRyan Nicodemus, iingcinga zentshukumo encinci, abahlohli, abalawuli bewebhu theminimalists.com kunye nababhali beencwadi ezininzi.
Uxwebhu olubonisa «i Izibonelelo ezingaphantsi zingaphezulu Ngobungqina babantu ngokuchasene nokusetyenziswa okungalawulekiyo eUnited States Eunited States.
Ubuncinci kukongezwa kwale ncwadi: Yonke into ehleliyoIsimemo esenziwe ngabancinci, esingakhange siguqulelwe kwiSpanish. Ungathini ukuba yonke into owakha wayifuna ayisiyiyo le uyifunayo? Yiloo nto eyenzekileyo kubaphathi bayo kunye nombuzo obekwe kwindlela yabo njengempendulo kwaye ngendlela yendalo, ubuncinci.
Lonwabile uhambo oluya kumazwekazi ama-5 kukhangelwa izitshixo zolonwabo; malunga nendlela yokufumana ibhalansi phakathi kokufuna imali, impumelelo kunye nenqanaba lentlalontle, kunye neemfuno zethu zokwakha ubudlelwane, impilo kunye nokuzaliseka kobuqu. Ngamabali obomi abantu abonwabileyo kunye neziseko zePositive Psychology (okwenzululwazi ephanda impilo), "Wonwabile" uzama ukubonisa ukuba singakwenza njani ukufezekisa ubomi obupheleleyo, obunempilo kunye nokonwaba.
Ubuncinci bezinto ezincinci
Thatha indawo yakho kwaye wonwabele ubomi bakho. Ixesha lethu lilinganiselwe kwaye sifuna ukuba libe semgangathweni. Sifuna ukulingana kunye nokuzola, kodwa imihla ngemihla kwaye Ukuqokelelwa kwezinto kungasikhokelela kwiimeko yoxinzelelo olusithintela ukuba sonwabe kwaye sonwabe.
ULucia Terol, ingcali kubuncinci kunye nombutho, wabelana ngamava akhe kunye nobuninzi beengcebiso ezifanelekileyo ezijolise ekufezekiseni ukulingana kwengqondo kunye nomzimba. Kwi-Minimalist Essence uyakufumana imikhwa esempilweni ekulula ukuyenza, yenziwe kwifilosofi yeminimalism, eyilelwe ukukunceda ukonwabele kwaye ushiye ukungoneliseki kunye nokuxhomekeka ngasemva.
Ayiqulathanga nokuba nenani elithile lezinto kodwa ngokuhlala kunye nezo zinto, imisebenzi kunye nobudlelwane obubonisa ubuqaqawuli bakho, iidayimani zakho. Ukulayita umthwalo wakho kuyo yonke enye into, edibene nenkululeko yokuhamba, isenzo kunye nesigqibo. Uziva ubhaka wakho njengomlingani hayi njengomthwalo. Ngaba ubulungele ubomi obanelisayo?
Ayizizo zonke okanye yonke into namhlanje
Este asiyoncwadi yolawulo lwexesha oza kuyisebenzisa. Ungathini ukuba ndikuxelele ukuba into eyenza ukuba uphumeze imveliso yakho ayikokusebenzisa ixesha kodwa yintando yakho? Ngale ndlela yolawulo, izixhobo ezintathu ziya ku-odola ubomi bakho phantsi kwemibuzo emithathu elula. Ukufunda ukulawula ixesha ayisiyiyo eyona nto iphambili, kodwa kukunika ilizwi kwinjongo yakho ebalulekileyo.
Ngaphantsi kwendlela yokujonga ubuncinciNdicebisa icebo lokusebenza ebomini bakho elisusela ekunciphiseni ikhabethe lakho, ukuphucula indlela otya ngayo, ukwenza lula ikhaya lakho kunye nokuseka ubudlelwane obuluqilima nabo babaluleke kakhulu ebomini bakho.
Ngaba ukhe wawabona okanye wawafunda amanye ala maxwebhu okanye iincwadi? Akufuneki ndifunde nina nonke, okanye yonke into namhlanje. Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukubona iMinimalism kwakudala kwaye andinakuyeka ukuyicebisa. Ngokubhekisele kuLucia Terol, ndingakuqinisekisa ukuba iinkqubo zakhe ziyasebenza ukuba ufuna zisebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Iincwadi ezi-4 kunye neencwadi ukuqonda ubuncinci
Indlela yokusika ii-bangs ezivulekileyo